ဆူမာချီယန် - ဝီကီပီးဒီးယား
(ဆီမာကျန် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
This ဆောင်းပါး may require cleanup to meet Wikipedia's quality standards. Please improve this ဆောင်းပါး if you can. The talk page may contain suggestions. (ဇွန် ၂၀၁၇)
ဆူမာချီယန်သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂ဝဝဝ ကျော်က စ၍ ယနေ့တိုင်အောင် ထင်ရှားလျက်ရှိသော တရုတ်နိုင်ငံသမိုင်း သုတေသီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံသမိုင်းကို မော်ကွန်း တင်ရာဖြစ်သော ဆူမာချီယန်စီရင်ရေးသားသည့် 'ရှီချီ'ခေါ် ကျမ်းမှာ ယနေ့တိုင် သမိုင်းပညာရှင်တို့ မှီငြမ်း ပြုရာကျမ်းကြီး ဖြစ်လေသည်။
ဆူမာချီယန်သည် ဝူးဧကရာဇ်မင်းလက်ထက် ဘီစီ ၁၄ဝ နှင့် ၁၃၅ ခုနှစ်တို့တွင် ထင်ရှားခဲ့သော နန်းတွင်းမော်ကွန်း ထိန်း သမိုင်းပညာရှင် ဆူမာတ်၏ သားဖြစ်သည်။ ဘီစီ ၁၄၅ ခုနှစ်တွင် ဖွားမြင်သည်။ ဖွားရာဒေသမှာ ယန်စီ (မြစ်ဝါ) မြစ်အနောက်ဘက်ကမ်းခြေရှိ လွန်းမင်းတောင်၏ တောင်ဘက် တွင်ရှိသော ရွာကလေးဖြစ်သည်။ ယခုခေတ်၌ ထိုရွာကလေး မှာ ချီချွန်ရွာဟု အမည်တွင်၍၊ ရှင်စီခရိုင်၊ ဟန်ချင်မြို့နယ် အပိုင်၌ တည်ရှိသည်။
ဘုရင့်အမှုတော်ကို ထမ်းရွက်စဉ်၊ ဆူမာတန်သည် ဗေဒင် နက္ခတ်တို့ကိုလေ့လာခြင်း၊ ပြက္ခဒိန်တော် ပြုစုခြင်းနှင့် ရာဇဝင် ရေးရာ မှတ်တမ်းများကို စုဆောင်းသိမ်းဆည်းခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရသည်။ ထိုစဉ်တွင် သူသည်ရာဇဝင်ကျမ်းတစ်စောင် ရေးသားပြုစုခဲ့ရန်ကြံစည်မိ၏။ သို့သော် မအောင်မြင်ခဲ့ချေ။ ဘီစီ ၁ဝ၁ ခုနှစ် သေဆုံးခါနီးအချိန်တွင်မှ သူ၏သား ဆူမာ ချီယန်အား သူ၏ဆန္ဒဖြစ်သော ရာဇဝင်ကျမ်းပြုစုရေးကို ကြိုးစားပြီးမြောက်စေလိုကြောင်းဖြင့် မှာကြားသွားလေသည်။ ဤတွင် ဆူမာချီယန်လည်း သူ၏ ဖခင် စုဆောင်းမှတ်သား ရှာဖွေထားခဲ့သော ရာဇဝင်ရေးရာအချက်အလက်များကို အမွေအနှစ်အဖြစ်ရရှိလိုက်လေသည်။
ဆူမာချီယန်သည် ငယ်ရွယ်စဉ်အခါကပင် သူ၏ ဇာတိ ဖြစ်သော ရွာကလေးကိုစွန့်ကာ၊ ချန်ဂန်(ယခုစီအန်း)မြို့တော်သို့ စာပေသင်ကြားရန်ထွက်လာခဲ့၏။ သူ၏ သင်ဆရာများကား တုံချုံရှူးနှင့် ကွန်အန်ကူအိုတို့ဖြစ်ကြလေသည်။ အသက် ၂ဝ အရွယ်အထိ ဆူမာချီယန်သည် ကွန်ဖူးဇီး၏ ဂန္ထဝင်စာပေကြီး များကို လေ့လာခဲ့၏။ ထို့နောက် ရှေးဟောင်းနှင့် ခေတ်သစ် ရာဇဝင်ရေးရာ မှတ်တမ်းများကို စနစ်တကျ လေ့လာသည်။ ထိုအခါမှစ၍ သူသည် တရုတ်နိုင်ငံကြီးကို အနှံ့အပြား သွားလာလှည့်လည်ကာ၊ ရာဇဝင် ရေးရာဗဟုသုတများကို ရှာမှီး၏။ သုတေသနအမှုများပြု၏။ တိမ်မြုပ်နေသော ရှေးဟောင်းဒဏ္ဍာရီနှင့် ပုံပြင်များကို ဖော်ထုတ်မှတ်သား၏။ ထို့နောက် သူ့ဖခင်၏ နန်းတွင်းမင်းမှုထမ်းရာထူးကို ဆက် လက်ထမ်း ဆောင်ရလေသည်။
ဘီစီ ၉၈ ခုနှစ် အသက် ၄၈ နှစ်အရွယ်တွင် ဆူမာ ချီယန်သည် မတရားပြုမူခြင်းခံရသည်ဟု သူထင်မြင်ခဲ့သည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖက်မှ ဝင်ရောက် ပြောဆိုမိသောကြောင့် ဧကရာဇ် ဝူးက အမျက်တော်ရှကာ၊ သင်းကွပ်ဆုံးမခြင်းကိုခံခဲ့ရလေသည်။ ထိုအချိန်တွင် သူသည် ရှီချီခေါ် ရာဇဝင်မှတ်တမ်းကျမ်းကြီးကို ပြုစုရေးသားလာခဲ့သည်မှာ ၇ နှစ်ပင်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်၏။ ထို့ ကြောင့် ဆူမာချီယန်သည် သူ၏ရာဇဝင် မှတ်တမ်း ကျမ်းကြီး ကို ပြီးစီးအောင် ပြုစုချင်သော စိတ်ဆန္ဒကြောင့်သာ သူ့ကိုယ် သူ သတ်မသေခဲ့ဘဲ၊ ဆိုးရွားခံပြင်းလှသော မင်းပြစ်မင်းဒဏ်ကို ကြိတ်မှိတ်၍ ခံယူခဲ့လေသည်။ ဘီစီ ၉၃ ခုနှစ် အသက် ၅၃ နှစ်သို့ ရောက်သောအခါတွင်ကား ဆူမာချီယန်သည် ရာဇဝင် မှတ်တမ်းကျမ်းကြီးကို အကြမ်းပြုစုပြီးစီးသွား ခဲ့လေသည်။ ဆူမာချီယန်၏ ရှီချီကျမ်းသည် အပိုင်းကြီး ၅ ပိုင်း၊ အခန်းငယ်ပေါင်း ၁၃ဝ မျှဖြင့် ဖွဲ့ထားသော ကျမ်းကြီးဖြစ်၏။ ရှေးဟောင်းဒဏ္ဍာရီလာ မင်းဝါမင်းလက်ထက်မှ ဘီစီ ၁ဝ၄- ၁ဝ၁ ခုနှစ်တိုင် ချူးခေတ် (ဧကရာဇ်ဝူးလက်ထက်)အထိ နှစ် ပေါင်း ၃ဝဝဝ ကျော်မျှသောကာလအတွင်း တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရာဇဝင်ရေးရာ အဖြစ်အပျက်များကို မှတ်တမ်းတင်ထား၏။ ရှီချီကျမ်းရေးသားပြုစုပုံကို ရောမ၊ ခေါမရာဇဝင်ကျမ်း များနှင့် နှိုင်းယှဉ်သော် ရှီချီကျမ်းကပိုမို၍ ကျယ်ဝန်းပြည့်စုံ ကောင်းမွန်သည်။ ဆူမာချီယန်သည် တရုတ်လူမျိုးတို့ယနေ့တိုင် အသုံးပြုဆဲဖြစ်သော ပြက္ခဒိန်ကို ပြုပြင်ပေးခဲ့သည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆူမာချီယန်&oldid=371008" မှ ရယူရန်
ဇွန် ၂၀၁၇ မှ ရှင်းလင်းရမည့် ဝီကီပီးဒီးယား စာမျက်နှာများ
ဤစာမျက်နှာကို ၁၂ ဇွန် ၂၀၁၇၊ ၁၁:၁၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။